Ngakho Level 27 luqala sinezisusa, siqala kancane 'Matrix’ ngemabhuloki esilengisiwe. Kukhona ezimbalwa mfana Ukugunda kanye namathiphu liyoshona Kulesi sigaba kanye nenani lesifanele ezifuywayo, uyasinda futhi nenombolo ehloniphekile izinkanyezi ivuleke!
Okokuqala zalo ezinhle ukwazi ukuthi ezifuywayo kuphela wehle eyodwa ngesikhathi, dont uhlupho uzama ukuceka kusaba ngakolunye uhlangothi webhodi uma isilwane yakho ngci, it nje Wont umsebenzi. Uma isilwane yakho in a amanzi okugqumisa zama futhi uhlanganyele amabhlogo nxazonke noma sihlose ezinye combos big futhi usebenzise Firecracker!
Sebenzisa Balloons yakho ngokuhlakanipha! Kukhona impela Balloons anemibala ambalwa ukhakhabiswe ngalolu ibhodi futhi kungaba Ukugunda kakhulu. Sebenzisa kubo ukusula emabhuloki phansi isilwane sakho noma ukujoyina up amabhange emabhuloki lafanako amaKhaladi. Into kuphela kangcono kunokuba usebenzise eyodwa ibhaluni ukwenza ezinye combos enkulu ukusebenzisa ezimbili (imibala ehlukene …kusobala!)
Imisiwe emabhuloki ubani?
Khumbula lokhu ezingeni has a inani elilinganiselwe uhamba, 60 eqinisweni futhi une 8 ezifuywayo ukuhlenga ukuze agcine 'Dilly dally’ ukuba okungenani, banakekele ibhizinisi lokuqala, lokhu umdlalo hhayi sekudlala!
Okhilikhethi njalo kukhona abangane bakho, uma uhola omunye ukusetshenziswa kwalo ukuletha phansi isilwane, hhayi iphuzu okuningi in ukusilondoloza noma 'ngosuku lwemvula’ kuyoba phezu wena phambi uqaphele!
Lwela ukususa yonke owodwa lokushaya amaphuzu big, Balloons ayasiza kodwa akubalulekile ukwenza lokhu. Beshaya izinkanyezi ezintathu nice kodwa khumbula kuqala yakho ukutakulwa the ezifuywayo kancane abampofu! Just ukusebenza eyodwa ikholomu ngesikhathi futhi uzoba nayo nale kwenziwa Ngokuphazima kweso. Uma une ezinye uhamba okusele lokhu siyonezela isikolo sakho noma ungasetha isilwane sakho up bese ukusebenza phezu beshaya ezinye amaphuzu. Gcina vula amehlo ubheke isikhathi multiplier amabhulokhi! bangakwazi ukwenza umehluko omkhulu isikolo sakho ikakhulukazi uma sihlanganise ezinye ndawonye!
Ukususa bonke kodwa munye umbala ungenza for amanye amaphuzu big beshaya!